Samarekha.com.np :: सुन्दरता र नायकत्वको नयाँ परिभाषा |
सुन्दरता र नायकत्वको नयाँ परिभाषा
प्रमोद धिताल || 172 Views || Published Date : 3rd January 2017 |
‘आई हेट पोलिटिक्स’लाई आफ्नो जीवन दर्शन बनाएका आधुनिक पुस्ताका नारीहरुलाई पनि उपभोक्तावादले नै शासन गरेको छ । जसले सन्देह होइन हर कुरामा विश्वास नै गर्नको लागि प्रशिक्षित गरेको छ । जति विचार विहीनता त्यति सन्देहमुक्त अनि जति सन्देहमुक्त त्यति उपभोक्तावादको शिकार । उपभोक्तावादले मानिसलाई विद्रोही बन्नबाट रोकिसकेपछि यान्त्रिक खन्चुवामा परिणत हुने खतरा बढ्दै जान्छ । ‘आइ हेट पलिटिक्स’को नारा दिइराखेका नारीहरु पनि त्यसबाट मुक्त हुने कुरै भएन । यसको अन्तिम परिणति भनेको सामन्तवादी पुँजीवादी शोषणको सिकार नै बन्नु हो । त्यतिमात्र होइन यसले सुन्दरता, महानता र असलीपनलाई मानिसको इनर क्वालिटि र ट्यालेन्सीबाट अलग्याउँदै लगेको छ । बाहिरी लुक्स मानिसको असलीपन, सुन्दरता र नायकत्वको कसी बनेको छ । यो योग्यता पूँजीवादी नाफावादी सत्ताले निर्माण गरेको सबैभन्दा बलियो मानक हो । तर उदात्त मानवीय मूल्य र दिर्घकालीन सार्थकताको कोणबाट हेर्दा सुन्दरताको यो सबैभन्दा कम्जोर मानक हो ।
हरेक कुरामा सुन्दरताको खोजी मानव मनको विशेषता हो । यद्यपी सुन्दरताका परिभाषा, बुझाई, ब्याख्या र अनुभूतिहरु देश, काल परिस्थितिसापेक्ष आफ्नै खालका हुन्छन् । सुन्दरताका परिभाषाहरु फेरिनेमात्र होइन कि कुनै बेला सुन्दरता कुरुपतामा बद्लिने र कुनै बेलाको कुरुपता सुन्दरतामा बद्लिने पनि हुन्छ । नीति, नैतिकता, नियम, कानून, विधि, विधन, आचरण सबै कुराका परिभाषाहरु स्थायी रहन सम्भव छैन । के हाम्रा पुर्खाहरुले हाम्रो दिमागभित्र थोपरिदिएका जीवनसम्बन्धि मूल्य, मान्यता र बुझाईहरु अकाट्य र सास्वत हुन् ? होइनन् । के हामीले बाँचिरहेको वर्तमान जीवनका सबै मूल्यहरु सन्देहमुक्त छन् ? अहँ कदापी छैनन् । अतः समय अनुकूल छ इतिहासमा अबलाकी उपमा पाउन अभिषप्त नारीहरुले विद्रोह गर्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो यो । सामन्ती र पूँजीवादी समाजले निर्माण गरेको कुरुप नायिकाको बिम्बलाई कुल्चिएर उनीहरुले युगलाई चुनौति दिने शक्तिशाली नायिका र वास्तविक सुन्दरताको पहिचान दिनुछ । लैंगिक आधारमा दाशत्वका स्तरहरु फरक होलान् तर पनि दासताको कुनै लिङ्ग हुँदैन चाहे त्यो पुरुषमाथि थोपरिएको होस् या नारीहरुमाथि । त्यसैले त्यसमाथि सहानुभूतिको अर्थ मानसिक मृत्यु सिवाय अरु केही होइन्, जुन सबैभन्दा भयानक मृत्यु हो । अब हामी काँधमा काँध मिलाएर यस मृत्युको विरुद्ध जुध्नु छ र यसलाई परास्त गर्नुछ । र त्यो भन्दा पहिले गर्नुछ आफै उभिएको धरातलमाथि चर्को सन्देह, चाहे त्यो हामीलाई जतिसुकै प्रिय लागिरहेको किन नहोस् । अब हामीले हाम्रो सन्देहमुक्त दिमागमाथि नै सन्देह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
आजसम्म रचिएका, रचाइएका, लेखिएका र घोकाइएका सुन्दरता, कुरुपता, असल, खराव, नायकत्व, खलनायकत्व, नैतिकता र अनैतिकता सम्बन्धि परिभाषा, बुझाई र व्यवहारहरुमा कति सच्चाई थियो र छ ? अब हामीले यी यावत पक्षहरुमाथि सन्देह गर्नुछ र थाल्नुछ नयाँ क्षितिजतर्फको यात्रा, जुन साँच्चिकै सुन्दर होस, गर्वयोग्य होस् ।
मुस्लिम धर्मावलम्वीहरुको लागि पवित्र भनिएको ग्रन्थ कुरान पल्टाएर हेरौं, त्यहाँ नारी अस्तित्व, अस्मिता र स्वाभिमानलाई सुलिमा चढाउने व्यवस्थित परिपञ्चहरु छन् । हिन्दु धर्मका पवित्र भनिएका ग्रन्थहरु हेरौं, त्यहाँ नारीहरुलाई होच्याउने र गिराउने सुत्रहरुको छेलोखेलो छ । तर बिडम्बना तिनै धर्मग्रन्थहरुबाट धेरै हदसम्म शासित छन् अहिले पनि आधुनिक भनिने नारीहरु । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने यदि यो समयमा समाजको नजरमा सबैभन्दा अराजक कसैलाई हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने त्यो पात्र हो–नारी । यदि सबैभन्दा राजनीतिक र विद्रोही चरित्रको कसैलाई हुनुपर्ने छ भने त्यो पात्र हो–नारी । राजनीतिक हुनुको अर्थ कुनै पार्टी विशेषको झण्डा बोकेर हिँड्नुमात्र होइन बरु तसलिमा नसरिन पनि हुनु हो, अरुन्धति रोय पनि हुनु हो र हुनु हो मणिपुरकी इरोम सर्मिला । र ती सबै–सबै हुनु हो जसले रोजेका छन् हजारौंवर्षदेखिको पक्षपाती विधि विधानले आफूमाथि थोपर्दै आएको जीवन जिउने तरिकाको विकल्पमा जीवन जिउने नयाँ बाटो । विद्रोह र विचारले राजनीतिको माग गर्छ । राजनीतिले अधिकार र आत्मसम्मानको माग गर्छ । त्यसैलाई परम्परागत र दास मानसिकताका उपजहरुले समाज, संष्कार, नैतिकता र आचरणविरोधी भन्ने आरोप लगाउछन् त्यो भिन्दै कुरा हो ।
समयले हामीलाई योगमाया दियो, पारिजात दियो । उनीहरु सन्देहकै उपज थिए । जहाँ सन्देह हुँदैन त्यहाँ न जीवनजस्तो जीवन हुन्छ, न त क्रान्ति नै । तर अबको समयमा विद्रोह स्वरुप आत्महत्या रोज्ने होइन निरन्तर लडिरहने योगमायाहरुको पल्टन चाहिएको छ । अब सनातन सत्ताको विरुद्धमा निर्णायक धावा बोल्नको लागि एउटी मात्र पारिजात भएर पुग्दैन पारिजातहरुको ठूलै पल्टन चाहिएको छ । जसले इतिहसमा सुन्दरता र नायकत्वको नयाँ मानक रचून । सोंच्ने, सन्देह गर्ने र विद्रोहको भाषा बोल्ने कार्यलाई अघोषित वारेन्ट जारी गरिएको समयमा सबैभन्दा सुन्दर र नैतिकवान नायिकाहरु मेरो विचारमा सन्देह गर्ने नारीहरु नै हुन् । जुन सन्देहले सनातन सत्तामाथि हमला गरोस् । बनिबनाऊ मान्यतामा हेरफेर ल्याओस् । जसले उनीहरु र सिंगो अभिषप्त समाजकै भाग्यमाथि क्रान्ति ल्याउन सक्छ । आचरण, संस्कृति, परम्परा र नैतिकताको नाउँमा विरासतमा प्राप्त जीवनका पदचापहरुमा मृत्युको षडयन्त्रभन्दा अरु केहि छैन । सुन्दरता र नायकत्वको नाउँमा पूँजीवादी अश्लिलताले सजिएको कथित स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता नभएर नयाँ शैलीको दासत्वभन्दा अरु केही होइन । यो परिबन्द र परिपञ्चलाई हामी जबसम्म चिर्न सक्दैनौं यथार्थमा नारी हुनुमा गर्व गर्ने असली हक हामीलाई प्राप्त छैन । वर्तमानले खोजी गरेका वास्तविक सुन्दर नायिकाहरु भनेका सनातनी सत्तासँग जोरी खोज्ने विद्रोही नारीहरु नै हुन् ।
(कवितांश ः सन्देह, अभय श्रेष्ठ)